April Fool-နောက်ဆက်တွဲ – ပြင်းရှတဲ့ ၀ိုင်တစ်ခွက်ပေါ့
This entry was posted in ဟိုဟိုဒီဒီ and tagged Benifits, Development, education. Bookmark the permalink.
4 thoughts on “April Fool-နောက်ဆက်တွဲ”
MrDBA | April 4, 2009 at 11:14 am
ုkom | April 5, 2009 at 8:28 am
ကုမ်ရာသီသူ | April 6, 2009 at 10:15 am
ဟုတ်ကဲ့ အမ၊ ဟိုတလောကတည်းက open course ကနေ စာတွေ ပြန်ဖတ်နေတာ အတော် ယောင်ဝါးဝါးဖြစ်နေလို့ အားလျော့လျော့နဲ့ ရေးမိတာပါ။ အခုနေ ကျောင်းပြန်တက်ချင်ရင် စာလိုက်နိုင်ဖို့ တော်တော်ကြီးကို မလွယ်ဘူးလို့ ထင်မိလို့ပါဗျ။ 😦
Bro. DB ရဲ့ ။ ကျောင်းဝင်ခွင့်က ခက်မှာဂျ။ 😦 တော်ကြာ ကျောင်းဝင်ခွင့်ကျပြီဆိုပြီး ၀မ်းသာမိပြီးမှ အဲဒီ သတင်းစာက နောက်သလို လုပ်ရင် အသဲကြွေပြီပဲ